Black Hole ရဲ့ ပထမဆုံးဓာတ်ပုံကို ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး (သို့) Katie Bouman - For her Myanmar
သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင် သက်သေပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ Black Hole ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့…
ယောင်းတို့ရေ … မနေ့ကညကပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်သွားစေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘာသတင်းလဲဆိုတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ သုတေသနလုပ်နေပြီး အခိုင်အမာသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ Black Hole ကို နောက်ဆုံးမှာတော့ ဓာတ်ပုံထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။
Black Hole Theory အကြောင်း မသိသေးတဲ့ယောင်းတွေအတွက် သိသလောက် ပြောပြပေးမယ်နော်။ ဒီသီအိုရီက သိပ္ပံဖခင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းဆီက စလာပြီး လူတွေလက်ခံလာနိုင်တဲ့ လေ့လာချက်တွေကို ချပြခဲ့တာကတော့ မကြာသေးခင်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ စတီဖင်ဟော့ကင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စတီဖင်ဟော့ကင်းရဲ့ လေ့လာချက်အရဆိုရင်တော့ Black Hole ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ ဘယ်အရာမဆို အမှုန်သေးသေးလေးတွေ၊ အလင်းတန်းတွေကအစ ပြန်ထွက်လာနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ထာဝရပျောက်ဆုံးသွားမှာပါတဲ့။ ခေတ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ ဒါကိုလက်ခံလာကြပေမဲ့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။
Related article >>> ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ သူ(မ)
ဒီအချက်ကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သွားတာက အသက် (၂၉) အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင် ယုံမလားဟင် ? သူ(မ)နာမည်ကတော့ Katie Bouman ပါ။ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ရဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Katie ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ သီအိုရီတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိတဲ့ Black Hole ကို အပြင်မှာ တကယ်ရှိကြောင်း ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ထူးဆန်းတာက သူ(မ)ဟာ အများစုသော အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေလို ရူပဗေဒနဲ့ကျောင်းပြီးသူ မဟုတ်ဘဲ ကွန်ပြူတာသိပ္ပံနဲ့ ဘွဲ့ရထားသူပါတဲ့။ Black Hole ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ရရှိဖို့အတွက် ရူပဗေဒပညာရှင်တွေ၊ သင်္ချာပညာရှင်တွေနဲ့ နှစ်ချီကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ သူ(မ)ကိုယ်တိုင်လည်း ကုဒ်တွေရေးခဲ့ရပြီး သုတေသနအချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကို စုစည်းလိုက်မှ Black Hole ရဲ့ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဓာတ်ပုံထွက်လာခဲ့တာပါ။ ဘယ်လောက်တောင် အတုယူစရာကောင်းလိုက်သလဲနော်။ သူ(မ)ကြောင့်ပဲ Black Hole ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမြင်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ Black Hole ကို ဘယ်လိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူရမယ့်အကြောင်း သူ(မ)ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုတော့ အောက်ကဗီဒီယိုမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။
Related article >>> အတုယူလေးစားစရာ ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး CEO (၅) ဦး
Stella ကတော့ ဒီသတင်းကို မြင်မြင်ချင်း ခေါင်းထဲပေါ်လာတာကတော့ စတီဖင်ဟော့ကင်းသာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးရင် ဘယ်လောက်များဂုဏ်ယူဝမ်းသာနေလိုက်မလဲဆိုတာပါပဲ … ယောင်းတို့ကော ဘယ်လိုထင်လဲ ?
References : Time magazine, TED, CNN News, NASA
သိပ်ပံပညာရှငျတှတေောငျ သကျသပွေနိုငျခွငျး မရှိသေးတဲ့ Black Hole ရဲ့ ဓာတျပုံကို ရယူနိုငျခဲ့တယျဆိုတော့…
ယောငျးတို့ရေ … မနကေ့ညကပဲ တဈကမ်ဘာလုံးကို အုတျအျောသောငျးနငျးဖွဈသှားစတေဲ့ သတငျးတဈပုဒျထှကျပျေါလာပါတယျ။ ဘာသတငျးလဲဆိုတော့ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ နှဈပေါငျးမြားစှာ သုတသေနလုပျနပွေီး အခိုငျအမာသကျသပွေနိုငျခွငျးမရှိသေးတဲ့ Black Hole ကို နောကျဆုံးမှာတော့ ဓာတျပုံထှကျလာခဲ့ပွီဆိုတာပါပဲ။
Black Hole Theory အကွောငျး မသိသေးတဲ့ယောငျးတှအေတှကျ သိသလောကျ ပွောပွပေးမယျနျော။ ဒီသီအိုရီက သိပ်ပံဖခငျကွီး အိုငျးစတိုငျးဆီက စလာပွီး လူတှလေကျခံလာနိုငျတဲ့ လလေ့ာခကျြတှကေို ခပြွခဲ့တာကတော့ မကွာသေးခငျက ကှယျလှနျသှားတဲ့ စတီဖငျဟော့ကငျး ဖွဈပါတယျ။ စတီဖငျဟော့ကငျးရဲ့ လလေ့ာခကျြအရဆိုရငျတော့ Black Hole ထဲကို ရောကျသှားတဲ့ ဘယျအရာမဆို အမှုနျသေးသေးလေးတှေ၊ အလငျးတနျးတှကေအစ ပွနျထှကျလာနိုငျစှမျးမရှိဘဲ ထာဝရပြောကျဆုံးသှားမှာပါတဲ့။ ခတျေတှပွေောငျးလာတာနဲ့အမြှ ဒါကိုလကျခံလာကွပမေဲ့ လကျဆုပျလကျကိုငျပွစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။
Related article >>> ဆလိုဗကျကီးယားနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံး အမြိုးသမီး သမ်မတဖွဈလာတဲ့ သူ(မ)
ဒီအခကျြကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျသှားတာက အသကျ (၂၉) အရှယျ အမြိုးသမီးတဈယောကျဆိုရငျ ယုံမလားဟငျ ? သူ(မ)နာမညျကတော့ Katie Bouman ပါ။ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ရဲ့ ကြောငျးသူတဈဦးဖွဈတဲ့ Katie ဟာ နောကျဆုံးမှာတော့ သီအိုရီတဈခုအနနေဲ့ပဲရှိတဲ့ Black Hole ကို အပွငျမှာ တကယျရှိကွောငျး ဓာတျပုံနဲ့အတူ သကျသပွေနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ထူးဆနျးတာက သူ(မ)ဟာ အမြားစုသော အာကာသသိပ်ပံပညာရှငျတှလေို ရူပဗဒေနဲ့ကြောငျးပွီးသူ မဟုတျဘဲ ကှနျပွူတာသိပ်ပံနဲ့ ဘှဲ့ရထားသူပါတဲ့။ Black Hole ရဲ့ ဓာတျပုံကို ရရှိဖို့အတှကျ ရူပဗဒေပညာရှငျတှေ၊ သင်ျခြာပညာရှငျတှနေဲ့ နှဈခြီကွိုးစားခဲ့ရပါတယျ။ သူ(မ)ကိုယျတိုငျလညျး ကုဒျတှရေေးခဲ့ရပွီး သုတသေနအခကျြအလကျတှအေကုနျလုံးကို စုစညျးလိုကျမှ Black Hole ရဲ့ကမ်ဘာ့ပထမဆုံးဓာတျပုံထှကျလာခဲ့တာပါ။ ဘယျလောကျတောငျ အတုယူစရာကောငျးလိုကျသလဲနျော။ သူ(မ)ကွောငျ့ပဲ Black Hole ကို တဈကမ်ဘာလုံးမွငျခှငျ့ရခဲ့ပါပွီ။Black Hole ကို ဘယျလိုဓာတျပုံရိုကျယူရမယျ့အကွောငျး သူ(မ)ရဲ့ပွောကွားခကျြတှကေိုတော့ အောကျကဗီဒီယိုမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျနျော။
Related article >>> အတုယူလေးစားစရာ ကမ်ဘာ့အအောငျမွငျဆုံး အမြိုးသမီး CEO (၅) ဦး
Stella ကတော့ ဒီသတငျးကို မွငျမွငျခငျြး ခေါငျးထဲပျေါလာတာကတော့ စတီဖငျဟော့ကငျးသာ သကျရှိထငျရှားရှိနသေေးရငျ ဘယျလောကျမြားဂုဏျယူဝမျးသာနလေိုကျမလဲဆိုတာပါပဲ … ယောငျးတို့ကော ဘယျလိုထငျလဲ ?
Tags: Astrology, black hole, breaking news, Knowledge, NASA, News, physics, space, theory, women empowerment, Women News, World
Stella April 11, 2019